Kwenzeka ntoni kwi-china | Ezezimali
Kwenzeke ntoni eChina
USusana Maria Urbano Mateos | | Bolsa, I ngxaki, Ezopolitiko
Iindawo ezininzi zehlabathi zangcangcazela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuba I-Shanghai okanye i-Shenzhen Stock Exchange banciphise i-7% ebangele ukuba ilahleko enkulu ibekho kwezinye iimarike kwihlabathi liphela.
Ilahleko ethe yafunyanwa kwiimarike zehlabathi kungenxa yokuba I-China ngomnye wabathengi abaphambili Kumazwe amaninzi.
1 Kutheni le nto iimarike zentengiso zase China ziye zehla ngesiquphe?
2 Ukuwa kwemarike yemasheya ngoJanuwari 7
2.1 Kukho imali eninzi eChina echitha ngaphandle kwelizwe layo
2.2 Kuya kuba yinto enzima kwiLatin America
2.3 Oyena msebenzisi mkhulu wamandla
3 Zithini ezi lahleko
4 Ukuhla kwexabiso okukhulu kulo nyaka uphelileyo
5 Abasemagunyeni bazi iinyanga
5.1 Ngubani ophumeleleyo okanye olahlekayo ngayo yonke le nto
6 Ngeemvulo ezimnyama azimbi kangako
Kutheni le nto iimarike zentengiso zase China ziye zehla ngesiquphe?
Enye yeengxaki Izizathu eziphambili zokuba kweentengiso zestokhwe zase China Kungenxa yokuba kunyaka wesihlanu ngokulandelelana umsebenzi weenkampani kunye neefektri wehlile, uqoqosho aluzange lubenakho ukuqhubeka. Ukusukela ngoDisemba wonyaka ophelileyo, ukwehla okuphawulekayo kwe-48.2 kwaqala ukuqatshelwa. Iingcali zentengiso yesitokhwe zikwenze kwacaca ukuba kukho izinga lokuthenga elingaphantsi kwama-50%, oku kubonisa ukuba intengiso inika iziphumo ezibi.
Kwiminyaka engama-25, Imakethi yaseTshayina ilawule imigaqo-nkqubo emikhulu yamaxabiso asezantsi Kwaye le yinto inokubonwa kwizigidi zamaphepha entengiso amaTshayina. Kumazwe amaninzi, oku kuye kwabizwa ngokuba zezopolitiko ezingenabulungisa, kuba amazwe amaninzi akanakukhuphisana nalawo maxabiso.
Unyaka ekuphela kwawo apho ilizwe lamaTshayina lafumana owona mzuzu ubalaseleyo ngowama-2008. Ngelo xesha, ukukhula kwentengiso kwakuphantse kube li-10% kwaza kwaqala ukwehla kwezoqoqosho.
Ukuwa kwemarike yemasheya ngoJanuwari 7
La Ukonakala kwestokhwe okwenzeka ngoJanuwari 7 Kwakugadla wonke umntu kwaye kwaqala ukuphakamisa ii-alam kumazwe. Isizathu silula, kuba i-China ngumthengi omkhulu wamanye amazwe emhlabeni, siyakukhumbula ukuba i-China ayinayo imali yokutyala imali kunye nokuthenga ivolumu eyithengayo, uqoqosho lwala mazwe nalo luyakuchaphazeleka kakhulu.
Kukho imali eninzi eChina echitha ngaphandle kwelizwe layo
Ngaphandle kwamathandabuzo, uninzi lweefektri zaseTshayina zithenga iimveliso zazo ngaphakathi elizweni, oku kubonisa ama-22.6 ngokubhekisele kwi-GDP; sithetha ngaphezulu kwe-10 trillion yeedola; nangona kunjalo, ukuthengwa kwabo abakwenzayo ngaphandle kwelizwe kungama-18 ezigidi zeerandi. Uninzi lwezinto abazithenga ngaphandle kwelizwe kukutya kunye neempahla.
Amazwe aphambili athenga kuwo i-China yi-South Korea, Japan ne-United States.
Kuya kuba yinto enzima kwiLatin America
ILatin America ithengisa inani elikhulu leemveliso eChinaKe ukuba uqoqosho luyehla, amazwe amaninzi akuLatin America aya kuba sengxakini.
IBrazil neChile Ngawona mazwe mabini anika elona nani liphezulu lokuthengisa eChina kwaye neengcali ziye zatsho ukuba ngekhe kumangalise ukuba omabini la mazwe akwimo yokudodobala kwezoqoqosho ukuba i-China iyeka ukuthenga izinto ezingafunekiyo kula mazwe mabini.
IMexico lelinye lawona mazwe aphambili athengisela iChina kwaye ikwindawo yama-33 kuluhlu lwamazwe athengisa eChina ngesixa esikhulu.
Oyena msebenzisi mkhulu wamandla
Kwelinye icala, i-China lelinye lamazwe eliqwalaselwe njenge lelona lizwe likhulu elisebenzisa amandla emhlabeni. Kwangelo xesha, lilizwe elingenisa ioyile eninzi, eyenze ukuba ibe lilizwe elilinganayo ne-United States ekuthengeni ioyile. Kunyaka ophelileyo ingenise i-7.2 yezigidi zemiphanda yeoyile… ngosuku.
Zithini ezi lahleko
Uninzi lwe amazwe avuke ngeendaba zeengxaki e China kwaye bothuka kakhulu kuba ezi lahleko zithetha ngezalathi ezimbi kwilizwe. Ngokukhawuleza, iingcali zinike uluvo lwabo kwaye bathi uninzi lweefektri zase China kunye noqoqosho ngokubanzi ziya kuhlala zinjalo unyaka wonke. Kuyancomeka ukuba iziganeko ezenzeke ngomhla we-7 zisisiqalo sayo yonke le nto kwaye uqoqosho lwaseTshayina aluhambi kwelona xesha lihle.
Ukuhla kwexabiso okukhulu kulo nyaka uphelileyo
Kunyaka ophelileyo, phakathi ku-Okthobha imali ye I-China ihlupheke kakhulu, i-yuan yehliswa nge-4.6% kwaye injongo yayikukwenza ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kubize kakhulu ukuze uqoqosho lukhawuleze kwaye ngale ndlela, uqoqosho lwaseTshayina lukhule nge-7% ngonyaka; Nangona kunjalo, ngenxa yoko inolu xabiso.
Kwelinye icala, uqoqosho oluphambili lweCitigroup luye lwathi ayisiyoqoqosho lwaseTshayina kuphela, kodwa umhlaba ngokubanzi ukwimzuzu obuthathaka kakhulu kwaye unokuba neengxaki ezinzulu ukuba awuqapheli ngotshintsho lwemali.
Uyibeke yacaca ukuba into eyenzeka e-China ayisiyiyo kwilizwe lodwa kwaye kulindeleke ukuba yenzeke nakwamanye amazwe oqoqosho lwase Latin America. Amanye amazwe aseAsia aya kuchaphazeleka kanobom Kodwa emva kwalo nyaka, iimeko kumazwe amaninzi ezisengxakini ngoku ziya kuqala ukuphucula.
Abasemagunyeni bazi iinyanga
Kangangeenyanga ezithile ngoku, abasemagunyeni bazamile ukuzola e-China kwaye bazola kuzo zonke iindawo zelizwe, njengoko iifektri ezininzi zaqala ukothuka.
Isizathu kukuba a ukuhla kwexabiso (ezazisele ziphantsi) ezazinika ukuzithemba okuncinci kwiinkampani kwilizwe liphela. Ukwehla kwamaxabiso kwenzeka ngoJuni wokugqibela kwaye ukusukela ngoko khange bakwazi ukubuyela kwakhona.
Okwangoku nokuzinzisa amashishini, urhulumente wase-China wangena ukunceda ngezigidi zeerandi zamashishini ngelixa imali yelizwe izinzile.
Ziliqela Ilinganiswe yikomishini yolawulo kwimarike yemasheya.
Ngubani ophumeleleyo okanye olahlekayo ngayo yonke le nto
Emva komhla wesi-7, uninzi lweebhegi zaqala ukuzinza kunye ne Imarike yemasheya yaseShanghai yaqala ukwehla kodwa emini baphinda bazinza kwakhona.
NgoMvulo omnyama, njengoko sele beqalisile ukubiza olu suku e-China, ibe ziindaba zehlabathi. Inkqubo ye- Ixabiso leoyile yenzekile ngemizuzwana ukuba ibe nelona xabiso lisezantsi kule minyaka mi-6 idlulileyo (kwaye ibisezantsi kwiminyaka edlulileyo) iGolide, intsimbi nayo yawa nge-0.6%, nto leyo eyenze ukuba okokuqala, wonke umntu azise izandla entloko ngaxeshanye.
Esi siphumo sokuhla sasisikhulu kangangokuba kwimizuzu yeeyure sidlulisele eYurophu kwaye ukusuka apho iplanethi yonke yaxhuma.
Nangona kunjalo, ngaphandle komzuzu woxinzelelo obukhe waphila kunye noqikelelo oluninzi lwalo nyaka, Imakethi yaseTshayina iseligunya lesibini lehlabathi kwaye kubonakala ngathi akukho nto izakumsusa apho. Iingcali zezoqoqosho zithe sele kulindelwe ukuba kwisiqingatha sokuqala sonyaka, Uqoqosho lwase China luza kwehla kuba zininzi izinto ebezishukuma ngokwemali; ezinye zazo bezingaziphethe kakuhle kwaye ibisaziwa ziingcali ukuba kuyakwenzeka.
Ngeemvulo ezimnyama azimbi kangako
Kubonakala ngathi uMvulo oMnyama uphethe into engentle, kuba kweyona lahleko inkulu kwihlabathi liphela bahlala benikwa elo gama, nangona kunjalo, iingcali ziye zakhumbula ukuba yonke iMivulo eMnyama ilandelwa yinzuzo enkulu yelizwe kwaye ifumana ngokukhawuleza okukhulu.
E-China nakubantu bayo, inyani yokuba urhulumente uyazi kwaye uthembisile ukuba akazukuliyeka ilizwe litshone ngokwenza inaliti enkulu yemali xa kufanelekile yeyamaTshayina kunye nezinye izizwe. Uqoqosho oluxhomekeke e-China ivelufa yeoksijini ibaluleke kakhulu.
Ngokwenyani, amazwe anokutshatyalaliswa ngawona aphuhlileyo, kule meko, uninzi luseYurophu. Imfuno yabathengi esezantsi kunye nemveliso esezantsi yaseYurophu kunye nokuthumela ngaphandle kuya kuqatshelwa.
Okokugqibela nanjengoko besesitshilo, ILatin America izolahlekelwa ngumthengi omkhulu wezinto ezisetyenzisiweyo, Oku kungakhokelela kukuhla kwamaxabiso asezantsi anokuthi agqume imveliso okanye abangele ingxaki kwamanye amazwe. Iimbono kule meko zibekwe ePeru naseChile.
Nangona iindaba ezivela e-China kunye nokuvalwa kwe-stock market yinto eyothusayo umhlaba wonke, iingcali zitsho ukuba lelinye nje inyathelo lase China Akuzange kwenzeke njengoko babenethemba. Kumanqaku amaninzi, isitokhwe samaTshayina besele kulindeleke ukuba sehle kodwa kungalindelwanga ukuba sikweli nqanaba.
Amazwe amaninzi athi enyanisweni, ayisiyonto engaphezulu koku isenzo esingafanelekanga ukuze amazwe angene engxakini kwaye ngandlela thile anyanzelise umhlaba ukuba ungene kwixabiso.
Isizathu kukuba ekubeni imali yabo iphantsi kakhulu, banokubuyela ngokukhawuleza kuloo nto, beshiya amazwe amaninzi elimele endleleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Kwenzeke ntoni eChina
Iimali-mboleko zika-Erasmus, ungazifumana njani?